Maitiro ekukudza urume
Pane mushonga wandingashandisa here kukudza mboro here, kana wechivanhu hawo?
Zi News 24 — Pane mushonga wandingashandisa kukudza mboro here,...
Pamwe vakadzi havazotauri nemuromo asi mumoyo make. Izvozvo zvine njodzi futi because anongotsvaga zvikomba nerweseri.
Pane zvakawanda zvekudzidza asi apa ndati titange nepadiki apa: Zvinogoneka kuti mukadzi atunde kakawanda: 4 times kana kudarika. Zvinotanaga ne foreplay yakanaka, sezvo foreplay iriyo inoshanda se appetiser. Good foreplay inoita kuti mukadzi aite nzara uye shungu dzekusvirwa.
Foreplay dziri pakawanda saka muzvikamu zvinotevera ndichatora nguva yekutaura nezve foreplay dzakasiyana siyana. Pari zvino ndichashandisa foreplay inotevera iyi pasviro yandicha tsanangura nhasi. Iwe murume bvisa bhutsu ne shirt nekukurumidza, wosara ne trousers. Vakadzi vanofarira kuona chest yemurume saka apa unenge wamupa chance yekutarisa chest yako. Famba zvishoma ne zvishoma wakamutarisa mumaziso, uchiswedera kwaari.
Mumbundikire, wotanga kupuruzira magaro ake zvinyoro nyoro asati atombobvisa hembe dzake. Isa maoko muhembe make wopuruzira magaro ake pamusoro pebhurugwa rake wobva watanga kumubvisa hembe dzake.
Ita uchimukisa kisa zvishoma. Iwe chibva wabvisa trouse wosara ne underwear. Usakurumidze kuibvisa uye iye imbomusiya aine bhurukwa nebra rake. Usakurumidze waribvisa.
Chimuradzika pa bed nekubva waita a deep kiss uchibata magaro zvakare. Paunorega kukisa ibva watanga kubata mazamu zvishoma ne zvishoma, uchiita kuti minwe yako ipote ichikwenya nato tits dzake. Pakarepo chimubvisa bra nekubva waisa zamu one mukanwa, rimwe wakabata nerumwe ruwoko. Ipapo rumwe ruwoko runenge rwuchifamba famba pakati pemakumbo ake, mukati mezvidya nepamusoro pe bhurugwa, uchiita kunge kumu nyerekedza.
Usashandise mazino pakuyamwa zamu. Shandisa malips ne rurimi. Mushure mechinguva chinja zamu rekuyamwa, wobva wapinza ruwoko mubhurugwa wotanga kutambisa matinji, kabinz nekusvika kumuromo webeche. Ipapo chirega kuyamwa wotanga kukisa nekunanzva uchienda kunzeve nemuromo, wokurumidza kudzika kuguvhu.
Svika kumagaro zvekare neruoko rwuri mukati mebhurugwa. Ita uchiteerera mafemero aanenge ava kuita, nekakugomera gomera kuti uzive kuti woenda here pachinhanho chinotevera. Chibva wamubvisa bhurugwa, iwe wobva wabvisawo underwear yako, wosvitsa muromo wako pa matinji.
Madyirwo ematinji ne kabinz anoda kutsanangurwa ne kuti vazhinji apa vanozoita zvinoita put off, kana kuti ivo vanotanga kusema nekuti havazive maitirwo azvo. Pazvikamu zvichatevera tichadzidzisanawo nemadzimai kuti vangageza sei zvinhu zvavo kuti zvichene uye zvipere mweya, kuti pave nerusununguko pamutambo uyu. Asi variko vakawanda vanogona kugeza vachichena kwazvo. Rurimi rwako ngarwutambise tambise matinji ruchikwenya kwenya kabinz zvekare. Shandisa rurimi nemalips chete. Kana matinji or kabinz zvazvimbirira, kana kuti mukadzi asisina kugadzikana nekuda kusvirwa, vhara mazino ako nemalips, zviya zvaunoita kana uchitamba nekamwana kacheche pakanoisa minwe yake mukanwa mako, iwe wonyebedzera kukaruma asi wakaviga mazino ako seri kwemalips ako.
Ita sekuruma matinji nenzira iyoyo, uchiadhonza zvinyoro nyoro uye kuapressa nemalips ako zviri firm. Kana matinji akati kurei ita kuti rurimi rwako rwukwenye kwenye piece yematinji inenge iri mukanwa paunenge wakaruma marumire andataura. Ita izvi uchianhonga one, one then wozoadaro ese pamwechete.
Itawo izvozvo kukabinz. Paunenge uchiita izvi ita kuti rumwe ruwoko runge ruchitamba nenyato kumazamu uko, uku nerumwe ruoko uchifambisa fambisa zvigunwe pabeche, uchiita uchipinza nekuburitsa chigunwe one kana two mukati.
Usarume matinji ne mazino chaiwo. At this stage anogona kutunda kamwechete kana kaviri. Uchenjere kuchemdza mwana wevaridzi…. Ko zvakaipei? Ndiko kuti kunakirwaka. Apa beche rake rinenge rava kuida kwazvo mboro but usamhanye.
Dzokera kumazamu nemagaro uye ne kukisa. Unoita izvi because paanotunda paya anopera simba mbijana saka unofanira kumupa kanguva. Pedzisira nekuyamwa matinji zvekare asi not kumu tundisa this time.
Just kumu heater. Chigadzirira kuipinza manje. Paunenge wava kuda kupinza imbokwiza kabinz kacho nemusoro wemboro seuri kupotsa buri. Paunozopinza usaise yese. Koira zvinyoro nyoro, uye wakaisa musoro chete. Ziva kuti munhukadzi haangonakirwi kubeche chete during sex asi ne dzimwe nhengo dzemuviri kusanganisira ma tits, magaro uye matinji saka paunenge wapinza musoro chete ita kuti maoko ako abate bate zvinhu izvozvo, uchiteerera kuti chiri kumupa kuchemerera kwakanyanya ndechipi.
Kana uchigona one hand should be pa one zamu, muromo wako on another, then rumwe ruoko pamatinji. Usakanganwe kupuruzirawo kana kuita eku gukuchira magaro. Apa chibva wati pinzisei but half chete, kwete yese. Uku uchikoira zvishoma nezvishoma. Allow her kutunda at least twice usati waipinza yese uchingoita zvandareva. Apa anenge ambotunda kare paunenge wamunanzva matinji usati waisa, saka anenge atosvitsa three or four orgasms kare.
Paanotunda kechi 3 ikako usamhanyira kupinza yese kwacho. Iburitse yese panze woita seunotangazve foreplay. Anotanga kudziya panyowani, kuitira kuti aite recover from that orgasm. Kana adziya chiisa yese but zvinyoro nyoro.
Koira zvine kasimba mbijana kwete hasha too much. Ipapo chibvumira mukadzi to take control because she will be going for her final orgasm. Vamwe vavo at this point vanoda kuuya pamusoro. Allow her to do that. Vamwe havaende pamusoro but ndiye anenge ava muridzi weku koira ari pasi ipapo. Rega akoire iye asi iwe haubve wati zii.
Koira zvekutevedzera zvaari kuda. This is because kukoira kwake ipapo anenge achitevedza kune G-spot yake. Ndiko kwaanenge achinangisa mboro painenge iri mukati.
Iwe ziva zvekuyamwa mazamu nekupuruzira magaro kana ari iye ari pamusoro uye tuma small kisses. Chenjera kuti hauzokoira zviri out of order ukamu disappointa nekumutadzisa kui endesa paari kuda. Uchaona kuti anenge ava kufemera padenga uye kuita zvinesimba kana kuridza mhere.
Paunoona kuti ava kuda kutunda mupe deep kiss, wakabata magaro. Usabvisa kiss kusvika apedza kutunda. This fourth orgasm inenge iri very explosive. Kubva kuvhudzi kusvika kutsoka anenge ari magetsi ega ega. Iwe imbomira kutunda ipapo. Hold on. Siya atunde ega. Paanopedza kutunda chimira kukoira kuitira kuti iwe usatundewo, asi kiss ngairambe yakarumwa. That is the strongest of all orgasms anogona kuitwa nemukadzi.
Imboti zii irimo ichiita kuvhita nekumira. Izvozvo anozvida chaizvo. Hazvina kunaka kukurumidza kuburitsa achangopedza kutunda. Vamwe vavo havatozive kuti kune this type of orgasm.
Vajaira tuma orgasm tunenge twe bonyora. Kazhinji kacho zvinokonzerwa neku kurumidzisa kutunda kwatinoita, tobva tashaya simba rekusvitsa munhu patinofanira kumusvitsa. The problem is that kana akasangana ne murume anomusvitsa ipapo ka one, obva aziva kuti pasi pano pane zvakadai, hamugoni kumudzora. Vakadzi vanosangana ne experience ye orgasm iyoyi ka shoma kuti vazotamba vachiita bonyora netuma toys twekutenga. Anenge oti paafungira kukwirwa anenge otoda ari murume chaiye chaiye, kwete zvema rubber ekutenga kushop.
Then choose one of the following positions: kumupfugamisa kana kumukotamisa woisa nekumashure; kana kuti kana asiri mukobvu stereki ngaarare nemusana, osimudza makumbo ake mudenga. Paunopinda pakati pemakumbo ake ita kuti makumbo ake auye on your shoulders. It means kuti paunosvika pabeche pake makumbo ake anenge akakochekera on your shoulders, aka pushwa kuenda kumusoro kwake. Beche rinenge rakaita kuzviyanika kana kuti kuzvipereka in that position.
Saka ndati zvinoda vasina muviri mukuru. Kune vamwe vakobvu asi vaine muviri uri flexible vanogonawo this position.
Utano Maitiro ekukudza urume Varume vazhinji vakambobvunza nzira yekukudza nayo mboro yemhando yechisikigo.
Izvo zvinotenderera pamambure zvakawandisa mune izvi uye zviripo kubva pamapiritsi kusvika kune mapombi ekutsvaira ayo anobatsira iwe uine hombe sikarudzi. Uye ndezvekuti murume haatombofara nehukuru hwepenisiti yake.
Anogara achida zvimwe kana kuzvida neimwe nzira kana kufunga kuti haape chinodikanwa chemufaro kumukadzi. Kubva pakusachengeteka uye kusava nechokwadi kwekuziva kana nhengo yako iri kukura kana kuti kwete, mishonga yakasiyana inoberekwa kuti igone kugadzirisa saizi yako. Muchinyorwa chino tichaenda kukudzidzisa maitiro ekukudza mboro nenzira yechisikirwo uye yakaratidza.
Nzira yesainzi Kana vakakuudza chimwe chinhu nezve izvi, chakasarudzika chinhu kufunga kuti hachipo. Kushambadzira uye makambani makuru anotamba patariro yevarombo varume vanofunga kuti nhengo yavo haiunze mufaro kune vakadzi. Izvi ndezvekuti makambani mazhinji anobatsirwa kubva kumishonga yekunyepedzera iyo inovimbisa kukuita iwe mboro hombe kana chinhu chikuru chete chiri vharuvhu yainosiya muchikwama chako.
Kuti utsigire chokwadi chekukudza mboro nenzira yechisikigo, yakachengeteka uye yakanyatso zadzikiswa, zvinodikanwa kuionesa nenzira uye kudzidza kwesainzi uko mhedzisiro inogona kuoneka. Kusahadzika kunogona kubviswa kana iwe waona nzira yekuwedzera saizi yenhengo yako masendimita mashoma uye nokudaro kuzadzisa iyo hukuru hwepenisisi. Zvichienderana nemunhu uye maitiro avo, mamiriro ehupenyu, nezvimwe.
Iko kuwedzera kweruzivo kwakasiyana. Zvisinei, kune hukama hwakachengeteka pakati pehukuru pamberi uye shure kwenzira yekuwedzera nhengo.
Iyi nzira yatiri kutaura nezvayo yakavakirwa pagwara rekurovedza rakatsaurirwa zvizere kune ichi chinangwa uye zvakaratidzwa kare. Iyo mboro ndiyo imwezve mhasuru iyo, kunyangwe ichishanda zvakasiyana, kana ikashanda uye ikasimudzwa inogona kukura. Iko kuchengetedzwa kwainovimbisa ndekwekuti matambudziko haamuke sezvazvinogona kuitika nenzira dzekuvhiya. Nzira yekukudza mboro Icho chokwadi chekuti iyi nzira inokurumidza uye inoshanda inoita kuti vanhu vazhinji vasave nechokwadi nezvechokwadi kwayo.
Nekudaro, isu tiri kuzozviratidza neuchapupu hwesainzi uye mhedzisiro yakawanikwa. Kunyangwe mapiritsi ekuwedzera urume achishanda, iwo makemikari atiri kuunza mumuviri uye ane mhedzisiro. Zvatiri kutsvaga ndezvechokwadi, zvinobudirira uye zvinogara kwenguva refu. Kune makosi mashoma ayo anoshanda mukuwedzera kwepenisi izvo zvinogona kukuvimbisa iwe kubudirira chaiko, saka unorasikirwa nekutenda mazviri.
Bhuku " Mboro Tenzi « Iyo inonyatsotsanangura mamiriro ezvinhu umo varume vazhinji vakaodzwa mwoyo nehukuru hwenhengo yavo uye inopa akateedzana emitambo yakarongwa nekubudirira chaiko. Navo unogona kuwedzera saizi zvese pakureba uye paupamhi.
Download Penis Master Bhuku Iwe unoda here kuwedzera nhengo yako? Tora iyo Penis Master Bhuku uye tanga kushandira pakuve nepipi hombe, uchaona mutsauko: Izvi zvakafanana nekuda kuwana mhasuru. Kuti uwane zvibereko, unofanirwa kugara uchiita zvinhu nemazvo. Iwo maekisesaizi anofanira kuitwa nemazvo kuitira kuti sikarudzi isatambura chero kukuvara panguva yekukura.
Sainzi kuyedza Dr. Brian Alfred Richards ndiye aive musayendisiti wekutanga kudzivirira mukana wekuti nhengo yemurume inogona kurebeswa muna Chidzidzo chakaitwa chakafemerwa ne "Chartham nzira".
Maitiro akagadzirwa naDr Robert Chartham, chiremba wepabonde. Kuti iite kuyedza, boka rakasarudzwa revarume rakazvipira kuti maphallus avo awedzerwe naDr. Varume makumi matanhatu nevatanhatu vakasarudzwa zvisina tsarukano.
Hafu yakashandisa nzira yaChartham uye imwe hafu imwe nzira dzakasiyana. Nenzira iyoyo, iwe waigona kuona kuti ndeipi yainyanya kushanda mukukudza nhengo yemurume.
Sezvo kuyedza kwakaenderera mberi, akasiyana akakosha maficha muhupenyu hwemurume wega wega aigona kuongororwa. Mumwe wavo aive nedambudziko remagariro uye remhuri rakamukonzera kushushikana. Hapana kana mumwe wevarume vakaedzwa uyu aive ne micropenis. Chidzidzo chakatora mwedzi mitatu zvachose uye zviyero zvakasiyana zvakaitwa pavarwere sezvo nguva yakafamba. Zviyero zvakatorwa mune yakasarudzika erection kuti uone kuti mhedzisiro yacho yaive yechokwadi.
Kuti uite izvi, mutongi akaiswa pane iyo pubic bone uye chiyero chakatorwa. Tepi inochinjika yakashandiswa pakukora. Mushure mezviyero, zvakaonekwa kuti izvo zvidzidzo zveChartham Method zvakawedzera zviyero zvavo anosvika anenge masendimita zvese pakureba uye pakukora. Kune rimwe divi, iyo imwe hafu iyo isina kushandisa nzira iyi haina kuratidza kuvandudza. Wakatogutsikana here? Zvakanaka usafunge nezvazvo futi, dhawunirodha bhuku ra master penis nekudzvanya apa y wedzera saizi yenhengo yako pane zvaunofarira.
Shanduko nzira Pakabudirira kubudirira kweiyi nzira, chakava chimwe chinhu chinoshanduka zvachose. Yakabudiswa mumagazini British Zvinyorwa zveBonde Mushonga kupedzisa kuti nzira dzinoshanda chaizvo. Nzvimbo dzemukati dzine nhengo yemurume dzinogona kuwedzera, zvichiita kuti zvive nyore kuwana ropa rakawanda nekumiswa kwega kwega.
Aya ndiwo maitiro anowedzera muhukuru. Iwe unogona kuwedzera peni yako uye kugadzirisa matambudziko ako ekuzviremekedza, nokudaro nekuvandudza hupenyu hwako hwepabonde uye hukama hwese hwauinahwo. Maitiro acho ane mashoma akakosha ezvinhu izvo zvavaifanira kufunga nezvazvo kuti zvibudirire: Maekisesaizi haangoshanda chete panhengo yemurumePane kudaro, zvinosanganisira mamwe mhasuru mumapanga, gluteus, uye mudumbu mudumbu.
Mvura inopisa inoda kuiswa pamberi uye mushure mekudzidzira kunzvenga kukuvara panhengo yesikarudzi uye kuwedzera kushanda kwezviitwa. Kumwe kumutsidzira kukwiza muviri kunofanirwa kuitwa panhengo yemurume.
Iko kushandiswa kwepombi pombi kunogona kudikanwa kuitira kuti ropa rakawanda rigone kuiswa munhengo yemurume uye nekuwedzera mhedzisiro. Sezvauri kuona, nenzira iyi iwe unogona kuziva nzira yekukudza mboro zvakasununguka, zvakachengeteka uye zvinobudirira.
Ndinovimba imi varume mune rombo rakanaka neChartham nzira.
Saka ndati zvinoda vasina muviri mukuru. Kune vamwe vakobvu asi vaine muviri uri flexible vanogonawo this position. Kana ari mumwe wevakadaro unofa zvako nekunakirwa. Ita kuti atambanudze maoko ake ese ari maviri semunhu ari pamuchinjikwa, iwe wobva waabata sezvinonzi uri kumurambidza kumuka zvenharo… holding her down on her wrists or palms, like you are pinning her down.
Chiita zvekurova nekusakadza nyini, uchienda mberi nekudzoka shure deep thrustsuye kumboramba wakaisa mberi mberi uchiita ma short movements, usingapi beche mukana wekupinda mhepo.
Pamwe pacho ita seunoitenderedza mukati imomo, kana kuita seuri kukokota mu cup ne spoon. Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus orgasm and iyoyi she will respect you for it, but its not easy ipapo because anenge ava weak, but kunakirwa anenge achiita seacha pesana pfungwa mwanasikana. Mutarise mumaziso chaimo wakaita ka kufinyama paunenge uchiita zvese izvi. Ratidza face iri serious, kunge une twuhasha mbichana. Kana akada kunzvengesa meso ake mubate matama udzore meso ake kwauri.
Ipapo anenge ochema chema kunge achakumbira ruregerero. Pa position iyoyi zviri nyore kugumha chibereko, especially kana une yakati rebei. Vamwe vanonakirwa nekugumwa chibereko asi vamwe vanorwadziwa, but hazvitadzise kukoira pamadiro.
Edza kuita zviri hard and zviine speed paunenge woda kutunda. Ita uchirova pa G-spot chete chete kuma dying minutes iwaya to increase the chances of another G-spot orgasm.
That is kana uchiziva pairi G-spot yacho. Ndichakudzidzisai later kuti inotsvagwa sei. Kana ukaona apicka zvekuti anogona kuita orgasm ipapa edza kuti muite orgasm pamwe chete Apa anotoiridza chete mhere kana akawana a second G-spot orgasm. Uchenjere kubva wamufendesa pakadai.
This is very important because kana ukamutangira unenge wadenha nyaya hombe. Zvinenge zvava kureva kuti wamusiira panzira and vanhu vacho havazvide. Apa unenge waneta manje because basa unenge wabata. Pakunotunda paya ibva waruma kiss hobvu.
Usakurumidze kuburitsa mboro kana watunda. Chaunotanga kubvisa ikiss, womborega mboro irimo uchimupuruzira mhanza nematama seunobvisa dikita, kana kufambisa kachigunwe pamhuno yake, nekuita sekunge uri kumupukuta misodzi. Womuudzawo mashoko erudo. Ipapo chizvomora hako mboro.
Kana ari mukadzi akarairwa kwaakabva anoziva zvekuita nekukurumidza pano buritswa mboro. Kana wasarudza position yekuisa nekumashure mutsauko ndewekuti haukwanisi kumutarisa kumeso. Asi unenge uine advantage yezvimwewo zvakawanda, sekutambisa mazamu, zvikuru sei nyatso dzake, uchiita ekusvoverera nekuti anenge akarembera.
Ukuwo unenge uchisvoverera matinji ne kabinz gongowakaita zvekumonerera maoko ako muchiuno chake, kana kumuita kuti asimudze rimwe gumbo otsika pa bed, kuti uwane mukana wekusvikira matinji nekabinz painenge yakapinda. Maitiro: Ita wekukotamisa pa side pebed, akaita sekusimudza magaro mudenga uye makumbo akati vhurikei.
Nyini inobva yauya yese kuseri kwauri ikoko. Ita mboro ye kubatira muruwoko woivhura musoro wayo zvakakwana, kuinzvonyora womboita seuri kunyemudza beche nemboro, musoro uchiti ukati kwizei kwizei kabinz woti pindei, bude, pindei, bude.
Ita sekuvhura beche neminwe ye one hand rumwe rwakabata mboro se hose pipe. Chipinza mboro yese kusvika yaguma kuti ndi. Yava nguva yekusvira manje.
Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus orgasm. In that position itawo uchipuruzira magaro. Akange ava kuchena chema chema kwazvo nekunakirwa iwe taurawo sezvandareva kare zveubaba. Chiita zviri hard ne more and more speed paunenge woda kutunda.
Chibva wadira hako hwese hurume maari pamadiro. Kana muri kuita zvenhumbu uye uine mhando ye mwana yauri kuda tevedzera zvinotevera: Kana uchida a girl, iburitse wodira hurume hwako wakapinza musoro chete, just about 3cm to 4cm.
Kana uri kuda a boy pinza yese kusvika kumagumo wochidira zvako hurume whacho. Chimbozororai kuitira second round pa next two or three hours. After second round morara zvenyu.
Third round mozoiwona kuma 5am or 6am. Mukandibvunza ndinokuudzai later the science behind kuita boy or girl zvandataura NB. Please onai kuti paunenge uri pamusoro pemumwe wako hauite zvekumu tsimbirira. Usaite zvekurarira munhu. Uye zivai kuti mushonga wazvo zvese kugeza. Vakadzi shandisai sipo dze deep cleansing kugeza mukosho nepakati pezvidya. Kunyanya dziri antibacterial. Kusahadzika kunogona kubviswa kana iwe waona nzira yekuwedzera saizi yenhengo yako masendimita mashoma uye nokudaro kuzadzisa iyo hukuru hwepenisisi.
Zvichienderana nemunhu uye maitiro avo, mamiriro ehupenyu, nezvimwe. Iko kuwedzera kweruzivo kwakasiyana. Zvisinei, kune hukama hwakachengeteka pakati pehukuru pamberi uye shure kwenzira yekuwedzera nhengo.
Bhuku " Mboro Tenzi « Iyo inonyatsotsanangura mamiriro ezvinhu umo varume vazhinji vakaodzwa mwoyo nehukuru hwenhengo yavo uye inopa akateedzana emitambo yakarongwa nekubudirira chaiko. Navo unogona kuwedzera saizi zvese pakureba uye paupamhi. Download Penis Master Bhuku Iwe unoda here kuwedzera nhengo yako? Tora iyo Penis Master Bhuku uye tanga kushandira pakuve nepipi hombe, uchaona mutsauko: Izvi zvakafanana nekuda kuwana mhasuru. Kuti uwane zvibereko, unofanirwa kugara uchiita zvinhu nemazvo.
Iwo maekisesaizi anofanira kuitwa nemazvo kuitira kuti sikarudzi isatambura chero kukuvara panguva yekukura. Sainzi kuyedza Dr. VaGwere vanoti ibbolo kana mabbolo kureva mboro. We were all going to school to attain higher qualifications. Kusvirwa beche Kusvirwa beche Kusvira mukadzi mukuru Kunakirwa nemboro Kunakirwa nemboro Mboro hobvu.
Mboro hobvu. VaBemba vanoti membe n. Vazhinji vakabva neko vachingo nyeperwa idya zondo, ita doggy style zvinoita, asi kunenge kuri kunyeperana chikuru kutaurirana mumba menyu muona zano muri pamwe chete, vamwe muchangoroorana paya muchiti kungo svinura chete motoda kuita bonde, murume anombononoka nokuti muri kuwanza ROMANCE. Machinda uyai ndibate mboro idzo mondikoira futi. Baba Shupi vakaita kunge varikufunga ndokusimuka pavanga vakagara ndokuuya ndokumira right next to me.
Mazwi eBantu. Handina kunyanya kunaka sterek sterek asi ndakanaka zvangu Anyway, tatoo nemakore taroorana naTaka tine vana vaviri, plus sex life yedu haina hayo kushata, murume wangu anogonawo hake kusvira zvekuti handingashore. Kusvira mukadzi mukuru. Dziya dzatinoona mumafirimu emapono dzinenge dziri doko asi kuti panogadzirwa firimu vanoita kuti firimu riratidze kunge hombe.
Chitubu chomukadzi hachidhambhi nokupinzwa zvombo zvakawanda. Ndakanyatsomubata beche apa zamu ndaisa mukanwa zamu rakange rakamira iroro riri pear shaped. Inyaya inogadzirika saka gadzirai mese mumba nekutaura. Murume ane zvese zvakakwana uye anoshanda basa. Zviri nani kumukadzi kusatombovata nomurume pane kuti uku zemo rakwira wava nemachakwi zasi uri kutoda kuti murume dai achipinda, iye opinda obva angoita seoda kukoira obva ati apedza, Mukadzi otosiiwa ati vavava pasisina chake.
Ndoda kusvirwa - atcd. Ini ndini ndine dambudziko. Imwe yemhando diki diki ndeye Vietnamese Osgood rat, inogona kuve iri pakati pe12 kusvika 17 masentimita kureba. Ndakaona beche rakanunira dzesviro Nezuro ndakazoti regai ndizvi traye. Vese varume nevakadzi vanohura asi kungoti vakadzi vanohura pachivande.
Kana mukadzi akamira kunze kunoonekwa hwabvu hunovhara zvichibva kuzvidya kunosvika pamutsemu uri pakati. Veduwee chihure chakangozvipengerwa hacho, handingati ndiri hure per say, I was married to my one and only husband for 16 years. Kunakidza murume wako zvelevel rekumusoro soro by amanda  download mp3 video kunakidza murume wako zvelevel rekumusoro soro by amanda.
Nyaya yako yakanofanana nokuti murume wako ouya pano kuzobvunza kuti angaita sei kuti asasvoda kukukoira. Tine imba kuBudiriro uko kwandinogara nevana.
Murume anondipa mboro yake kuti ndiidye, ondibvisa hembe…. Ndoda kusvirwa Ndoda kusvirwa Kusvirana nyoro Kusvirana nyoro See photos and videos uploaded by our supporters, if you have supported us and would like to share some images or a video this is where you can do it. Chii chiripo chekuita? Kusvirana nyoro - aka. Recent Videos Kwanayi Java — Tangai Bhawa — Taffy Theman… Aug 21, Mboro yangu yakange yamira kuti twi-i zvekutoti ini ndakange ndototadza kufema yakanga zvino yabaya paguvhu rangu.
Apo mboro yainge yabvuma sucking murume akaita kunge achadambura tambo dzandainge ndati shwee kusunga. Unyoro hwebeche raMona hwakanga hwawanda zvekuti hwaiyerera huchidonhera pasofa nepasi. Kana dai zvazvo zvakazarurwa izvi zvakanyorwa Ziva nhanho dzinotevera kana waiswa chepfu uye matipi ekudzivirira mamiriro aya anogona kukonzera rufu kumhuka.
Ndakarohwa nemboro iyi for about 59 minetsi ndikabvuma zveshuwa kuti dai ndirini mukuru wenyika ndaiti vhuka vhuka ngaitengeswe even mumasupa market chaiwo kana muchechi sechidyo becozkuchemedzwa nemboro Resources. Pane murume arumwa nhengo yake nehure raange achisvira. Results 1 - 50 of Kusunga murume mboro. Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo kugopera mwedzi mina makadaro. Kutyairwa zvine simba patafura yekushandisa. I am loving and caring and i am looking for a man is is also loving and caring to take care of me.
Weduwee ndakudawo anonzi murume. Mboro yemurume wangu haigone kunditundisa!
Posted in Kukudza mboro
thoughts on “Kukudza mboro”
22.08.2021 at 02:23